Shiinaha Qaybta Birta naqshadeeye Soo saare iyo Badeecad | Meesha
Naqshadeynta qaybaha birta waxaa ka mid ah qeexidda qaabka qaabdhismeedka, cabbirka, saxnaanta dusha sare iyo sifooyinka farsamo ee dhameystiran, ugu dambeyntiina waxaa ka soo baxa sawirro qeybtii ugu dambeysay ee wax soo saar.
Qaybaha birta ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha kala duwan. Naqshadeynta qaybaha birta waa isha nolosha qaybaha biraha. Mestech waxay bixisaa dhammaan noocyada saxda ah ee lagu farsameeyo qaybaha biraha, farsamaynta qalabka iyo qalabka lagu hago qalabka isgaarsiinta, qalabka tamarta dabaysha, qalabka caafimaadka iyo qalabka elektaroonigga ah.
Waxyaabaha jireed iyo kiimikada, cabirka, qaabka, isticmaalka deegaanka iyo adeegsiga qeybaha kala duwan ee biraha dhammaantood waa kuwo loo wada dhan yahay oo lagu kala duwanaan karo, iyo teknolojiyaddooda wax lagu farsameeyo sidoo kale aad ayey u badan yihiin.
Si shaqo wanaagsan looga qabto qaabeynta qaybaha biraha, waxaa jira saddex waxyaalood oo muhiim ah oo ay tahay inaynu caddayno.
1. jawiga isticmaalka qaybaha iyo shuruudaha qaybaha
(1). Shuruudaha cabbirka
(2). Shuruudaha adkaanta
(3). Saxnimada dusha sare
(4). Shuruudaha ka-hortagga daxalka
(5). Shuruudaha xoogga
(6). Shuruudaha qalafsanaanta
(7). Shuruudaha korantada iyo kuleylka
(8). Shuruudaha miisaanka
(9). Shuruudaha Buuxinta
Injineer ayaa naqshadeynaya
2. U dooro qalabka saxda ah si sax ah
Mabaadi'da xulashada qalabka naqshadeynta qaybaha biraha waa sida soo socota:
(1). la kulmo waxqabadka isticmaalka: maaddadu waa inay awood u yeelataa inay buuxiso shuruudaha naqshadeynta ee xoogga, adkaanta, adkaanta, habdhaqanka iyo tilmaamayaasha kale.
(2) Waxqabadka waxqabadka wanaagsan: fududahay in la socodsiiyo waxsoosaarka xasiloon, si loo hubiyo heerka gudbinta sare, iyo in la buuxiyo shuruudaha naqshadeynta saxnaanta cabbirka iyo shuruudaha waxqabadka.
(3) Dhaqaalaha: waxay xaqiijin kartaa wax soo saar ballaaran oo qiimo jaban leh.
Caadi ahaan sidashada iyo sita salka
Qalabka loo qaabeeyey
Qeyb ku dhufashada
Iyadoo la tixgelinayo shuruudaha farsamaynta farsamaynta ee qaybaha, taas oo ah, naqshadeynta qaybaha waa inay tixgelisaa tiknoolajiyada farsamaynta ee ku habboon si loo hubiyo waxqabadka loo baahan yahay iyo saxsanaanta, sida loo yareeyo dhibaatada hawsha, qiimaha iyo hagaajinta wax soo saarka.
(1) Mashiinka: qaybaha leh astaamo adag (xoog, adadag) iyo saxsanaanta cabbirka iyo xasiloonida, sida geerka, crankshafts, saa'idka iyo qaybaha kale ee gudbinta ee qalabka mashiinka ama mashiinada dhismaha, birta ama dahaarka naxaasta guud ahaan waa la xushay. Habka farsamaynta waa goynta farsamada.
(2). ku dhufashada: loogu talagalay qaybaha saxanka khafiifka ah, sida weelasha, qolofka, laambadaha laambadaha ama qaybaha xaashida, biraha gogosha ah ama shaabbadda ayaa guud ahaan loo isticmaalaa. Saxsanaanta tiknoolajiyaddan wax soosaarka ayaa ka hooseysa tan goynta, sidaa darteed qaybo ka mid ah shuruudaha saxda ah ayaa loo baahan yahay in la farsameeyo.
(3) Dareerida dhinta: qaybo ka mid ah oo leh qaab isku dhafan, inta badan qeybaha biraha aan birta ahayn, sida qolofka mashiinka, radiator iyo laambada heysata oo ka sameysan aluminium isku darsan, zinc alloy, daawaha magnesium iyo daawaha naxaasta ah, dhimista wax taaj oo kale ayaa si weyn badbaadin kara xaddiga goynta iyo helitaanka heerka waxsoosaarka sareeya. Ku habboon wax soo saarka ballaaran.
(4) Tiknoolajiyada kale ee wax soo saarka: ka sameysashada birta waxay ku habboon tahay wax soo saar ballaaran oo ka mid ah astaamaha biraha oo leh qeyb isweydaarsi joogto ah, iyo sintering budo ah ayaa loo isticmaalaa wax soo saar ballaaran oo ka kooban qeybaha birta ahama.
Mestech waxay siisaa macaamiisha naqshadeynta OEM iyo ka shaqeynta qeybaha birta. Haddii aad u baahan tahay wax ama aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah, fadlan nala soo xiriir.
Hore: Naqshadeynta alaabta caaga ah
Xiga: Wasakhda birta lagu tuntay
Wax taaj oo kale duro qaybta Nylon
Video doorsoomaha balaastigga ah ee albaabka balaastigga lagu duubay